देउवाको छाया सरकार
९ फाल्गुन २०७६ शुक्रबार Friday, February 21, 2020
KATHMANDUTemperature 17°CAir Quality211
सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस
टिकाउको हिसाबले हेर्ने हो भने बहुमतवाला सरकारभन्दा यो सरकार बलियो हुन्छ । तर सरकार बलियो भए पनि यसले कुनै कुराको जिम्मेवारी लिनुपर्दैन ।
३ माघ २०७५ बिहीबार
अन्तत: सभापति शेरबहादुर देउवाले छाया सरकारमै चित्त बुझाउने भएका छन् । पहिलेजस्तो अहिले सुत्केरीको औषधी खुवाएर सांसद हातमा लिन सकिने अवस्था छैन । त्यही भएर पूर्ण सरकार बनाउने त सम्भवै भएन । सम्भव भएको छाया सरकार मात्रै हो । त्यसमाथि राजनीतिमै छायामा परेको नेताले बनाउने भनेको छाया सरकारै त हो नि ।
छाया सरकार बनाउन सजिलो पनि छ । किनभने, यो सरकारले सदनमा बहुमत देखाइरहनु पर्दैन । होइन भने देउवाका लागि त्यही पनि सम्भव नहुन सक्छ । उनी सरकारमा भएकै बेला पनि बहुमत त पुग्छ तर देखाउनलाई पुग्दैन । त्यसैले उनका लागि त्यस्तो सरकार मात्र काम लाग्छ, जसमा बहुमत देखाइरहनु पर्दैन । देउवालाई बहुमतबिनाको सरकार मात्रै ठिक्क छ ।
अर्को कुरा, यो सरकार ढल्दैन । टिकाउ हुन्छ । टिकाउको हिसाबले हेर्ने हो भने बहुमतवाला सरकारभन्दा यो सरकार बलियो हुन्छ । तर सरकार बलियो भए पनि यसले कुनै कुराको जिम्मेवारी लिनुपर्दैन । यो एउटा पूरै गैरजिम्मेवार सरकार हो । देउवालाई यस्तै सरकार मात्र उपयुक्त हुन्छ । बहुमतवाला सरकारको त विपक्षी हुन्छ । तर छाया सरकारको विपक्षी पनि हुँदैन । त्यसैले कसैप्रति जवाफदेही पनि हुनुपर्दैन । देउवालाई चाहिने पनि यस्तै सरकार हो । अत: हामी आशा गर्न सक्छौँ, छाया प्रधानमन्त्री देउवाले अरु नचलाए पनि छाया सरकारचाहिँ सशक्त ढंगले चलाउनेछन् । एक थान अग्रिम बधाइ दिँदा केही बिग्रन्छ र ?
एमसीसीमार्फत नेपाललाई जुन अनुदान आउनेवाला हो, त्यो नेपालले सहजपूर्वक ग्रहण गरेर अमेरिकालाई...
अमेरिकालाई सहयोग गर्नुपर्ने बेला !
पार्टीभित्र अब गुटबाजी गर्न पाइँदैन भन्‍ने निर्णय जो छ, त्यो सबै गुट मिलेर गरेको सामूहिक न...
सरकारको अधिनायकवाद त फैलिादै गएर अहिले देउवासम्मै पुगिसकेको रहेछ । सरकारले ल्याएको एजेन्डा...
अधिनायकवाद फैलिँदै देउवासम्मै
माओवादी नेताहरु अहिले एकपछि अर्को दौरा–सुरुवालीकृत हुँदै गइरहेको देख्दा सर्वसाधारण भने चकि...
साताको दुई पटक डायलासिस गर्नुपरे पनि देश र जनताको सेवा उनले गरिरहेका छन् । यो सानो देशप्रे...
आराम होइन, अझै काम
ढिकाबाट टुक्रा–टुक्रा हुनु नै कम्युनिस्ट पार्टीको मौलिक विशेषता हो । जो पार्टी टुक्रा हुँ...
एमसीसी र सीसी